Author: Kazrajin JoJojin
Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Guurtida.
Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Xilka. Madaxwaynuhu wuxuu xilkiisa u fulin doonaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degsan. You are commenting using your Facebook account.
Xidhiidka Xukuumadda-dhexe ee gobollada iyo degmooyinka waxa caddaynaya xeer gaar ah. Kal-fadhiyada iyo Habaynta Golaha Wakiilada. Madaxweynaha, ka dib marka uu la tashado Golaha Xukuumadda.
Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada. Haddii ay xubin ka mid ah Golaha Guurtida ama Golaha Wakiillada ay ku timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad waxaa soo buuxinaysa beeshii uu ka tirsanaa inta laga gaadhayo nidaamka axsaabta ee doorashada.
Labada Gole ee Baarlamaanku fadhiyo wadajir ah ayey ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin: Xubinimada Golaha Wakuda waxa la waayi karaa haddii: Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada. Waxa si gaar ah loo dhiirri gelinayaa fanka, suugaanta iyo ciyaaraha wadaniga ah, iyadoo Ia dhawrayo aadaabta dawtuurka. Shaqaalaha Golaha Wakiilada Qod. Inuu yahay xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin.
Ciqaab iyo dembi waa wixii qodob jammhuuriyadda ama qaanuun jideeyey, waxaana reebban in ciqaabta loo fuliyo hab aan xeerka waafaqsanayn. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada Qod. Shareecadda lslaamku ma oggola in qofka Muslinka ah ka noqdo caqiidadiisa.
Wixii la isku qabto inuu Sharceedda khilaafsan yahay iyo in kaleama iyaga ula muuqda inuu Sharceedda khilaafsan yahay. Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada, waxayna tirtiraysaa caadooyinka wax u dhimaya Diinta, horumarka, dhaqanka iyo caafimaadka bulshada.
Retrieved from ” https: Xoghayaha Golaha iyo La-taliyayaal Qod. Hadiyadaha la siiyo Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha iyo Marwooyinkooda iyo Madaxda sare ee Qaranka ee Ieh muuqaal Qaran iyada oo lagu maamuusayo xilka ay hayaan waxa weeye hanti Qaran. Xubnaha Golaha Guurtida waxa lagu soo dooranayaa doorasho, habka doorashadana waxa nidaaminaya xeer. Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada.
Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha Qod. Ka qayb-gelidda osmaliland caalamiga ah, isagoo ka wakiil ah Jamhuuriyadda Somaliland.
Si sare Ioogu qaado aqoonta iyo dakhliga haweenka iyo weliba daryeelka qoyska, haweenku waxay xaq u leeyihiin in loo fidiyo waxbarashada dhaqaalaha qoyska iyo in loo furo dugsiyada farsamada iyo xirfadaha gaarka ah iyo kuwa jamhuuriuadda dadka waaweyn. Maxamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin dhegaysiga dembiyada ciqaabta ee lagu oogo xubnaha ciidamada Qaranka xaaladaha nabadda iyo dagaalka.
Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Other Political parties Passport. Constitutions of unrecognized or largely unrecognized states Government of Somaliland.
Tirada garsoorayaashu waa inaanay ka yaraan Guddoomiyaha iyo afar garsoore; waxaana nidaaminaya xeer gaar ah. Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka.
Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey. Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka Qod. Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka Somaliland 26kii Juun k iyo ka hor, waxa loo aqoonsanayaa muwaadin Somaliland. Awoodda iyo karaamada Qaranka.
Xuduudda Wax-ka-Bedelka iyo Kaabidda Dastuurka. Golaha cusub waxaa furaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo dhaarinaya xubnaha. Marka uu fadhiisan waayo laba kal-fadhi oo caadiya oo isku xiga, iyadoo aanay keenin duruuf awoodooda ka baxsani.
Haddii Golahu ka aqbalo istiqaalad. Madaxweynuhu waa madaxa Qaranka iyo Dawladda; waana astaanta midnimada muwaadiniinta ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland. Jideynta cashuuraha, takaaliifta, iyo tallaabooyin kale oo kor Ioogu qaadayo dakhliga. Dastuurka waxa saldhig u ah mabaadi’da Dasturuka.
Darnmaanad-qaadista lahaanshaha gaar ahaaneed iyo xaq dhowridda suuqa xorta ah.